Toriteny alahady 25 Mey 2014 pasteur Haja | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 25 Mey 2014 pasteur Haja
Nehemia 5:1-13 / I Timonty 6:3-10 / Lioka 15:25-32
Tantaran’ny Zokin’ny Zanaka adala : Fanoharana mifono fampianarana no atolotry ny Tompo ho antsika anio.
1- Tsy maintsy tia ny rahalahiko aho
Voatantara eto ny hadalana sy fitiavan-tenan’ilay zandriny noho ny amin’ny nilibàny sy ny nandaniany ny lova avy tamin-drainy. Niandry ny fiverenany foana ny rainy na mbola ho ela izany na efa ho vetivety. Akory ny nitranga, niverina soa aman-tsara ilay zanany ary dia nanaovan-drainy fety be. Tezitra aoka izany ilay zokiny nanambara fa izaho teto anatrehanao nandritra izay fotoana ela izay, tsy nahataitra anao, fa ilay adala io kosa nandany ny fananao rehetra tany ivelany tany nefa dia hanaovanao fanasana be toy izao.
Lesona : Fampianarana goavana omen’ny Soratra Masina antsika ny ‘“FITIAVANA NY RAHALAHY”. Alaim-panahy toy ity zokiny ity isika matetika ka sorena mahita ny hadalana ataon’ny sasany, ka mety hitsara, honosi-boho-tanana, manidy trano sns…. Raiso am-pitivana izy ireny fa iray aina aminao. Mba tsy foin’Andrimanitra koa izy ireny ka satriny hotadiavina foana.
Akopak’Andriamanitra toy ny lamba cf Nehemia hiala tsy ho eo anatrehany ny fiainan’izay mikiry biby mankahala ny rahalahiny na inona na inona antony.
2- Hevitra ara-panahy ny amin’ny fitiavana ny rahalahy
Ireny olona voahilika any ivelany, ary nosokajiana ho maloto ireny no mahamaika an’I Jeso. Izany no antom-pisian’ny Fiangonana sy ny Tafika Masina : manangona ny olona mbola any ivelany I Jesoa Kristy fa manana anjara lova ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra koa izy ireny. Anjarantsika izay efa manara-dia ny Tompo no mampiditra azy ao anatin’ny vala. Ny ankamaroan’ny olona maro rehefa mahita ny sasany niova fo dia mitakoritsika sy te hitsara ary manatsinkafona ny lasan’ireny olona nania ireny.
Lesona : Hanolo-tanana ho an’ireny ondry very ireny no andrasan’ny Tompo amiko sy aminao ; fa tsy hanao toy ilay Zokin’ny zanaka adala ka ho sorena sy ho velom-pialonana. Malalaka amin’izay tiany hatao Andriamanitra ka zony ny manao fanasana lehibe raha misy mpanota iray izay mibebaka.
Hafatra : Ry havako malala, fantatrao ve fa : Tena tian’Andriamanitra ianao nefa tsy foiny koa ireny nania ireny, tsarovy fa izaho sy ianao izay eo anatrehan’ny Ray mandrakariva ary efa manana anjara ao amin’ny fiainan’ny lanitra. Manana ondry hafa izay ivelan’ny vala koa ny Tompo, ary ireny dia tsy maintsy mbola hangonina. Izaho sy ianao no asainy manangona ireny mba hahafaly ny ao an-danitra ; Izany ny mission apetraky ny Tompo amintsika.
Inona no efa mba nataonao ho an’ireny ondry very ireny ? mety ho zanaka, Ray aman-dReny, mpiray tampo, mpiara-miasa, mpiara-monina sns….. hoy ny Tompo amintsika “ aza mifaly fa nanaiky anareo ny fanahy, fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo”
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 26 mai 2014